01-27-2011 09:11 AM #31
badinf, cannavaro, Ko Khant, koshwemung, Meursault, mokenlay, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-27-2011 09:58 AM #32
Last edited by SPMM; 01-27-2011 at 10:14 AM.
cannavaro, Ko Khant, Lynn Eainthu, Meursault, mrlynn, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
01-28-2011 01:18 AM #33
ကျွန်တော့ အိမ်သူအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရာမှာ ကျွန်တော့ကိုပါ စပွန်စာပေးတဲ့အတွက် အဖော်လိုက်ပေးရတာပါ။ သူကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရုံးတက်နေတဲ့အချိန်များပါတယ်။
cannavaro, jokershan, Ko Khant, koshwemung, Lynn Eainthu, Meursault, murphy, orjawlan, RunAtServer, sai naw, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
02-18-2011 02:06 PM #34
ဗီယက်နမ် ရိုးရာနံနက်ခင်းစာ။ အဖြူရောင် ဆန်ခေါက်ဆွဲဖတ်ကို အမဲသားပြုတ်ရည်ထည့်တယ်၊ အမဲသားပြားလွာလေးတွေထည့်တယ်။ ကြက်သွန်မိတ်ထည့်တယ်။ ဒါဘဲ။ လမ်းဘေးဆိုင်အပါဝင် နေရာတိုင်းမှာရောင်းတယ်။ တို့ဆီကမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေလိုဘဲ အိုးကြီးတွေနဲ့ရောင်းကြတာမို့ လူကြိုက်များတဲ့ အစားစာဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က တအားအေးတဲ့ရာသီမို့လားမသိ နံနက်အစောကြီးကိုဘဲ အဲဒိနံနက်စာကို အဖြူရောင် ဆန်အရက်ပုလင်းလေးတွေနှင့် တွယ်နေကြတာလည်းမြင်ခဲ့ရပါကြောင်းဗျာ။
Last edited by mrlynn; 02-18-2011 at 02:13 PM.
badinf, baung, cannavaro, daylight, DrJones, jokershan, k-pooh, Kaung Lay Luck, koluchaw, koshwemung, Lynn Eainthu, Meursault, mgmgthan, mokenlay, nakamura, nyisay, orjawlan, Perigee, RunAtServer, thatonthu, ttaswo, Ye Win Soe, Zeth, ZuKa
04-07-2011 09:37 AM #35
Hanoi Fine Art Museum
Temple of Leacture ပြီးတော့ Fine Art Museum ဘက်ခရီးဆက်ဖြစ်တယ်။ ခရီးဆက်တယ်ဆိုပေမယ့် လမ်းဟိုဘက်တင်။ ဝင်လာခဲ့တဲ့မုတ်ပေါက်ကဘဲပြန်ထွက်ရတယ်။ နေ့လည်စာစားချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ အနီးနားမှာတင် ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေထဲကတစ်ခုမှာဘဲဝင်စားလိုက်တယ်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေ အလာများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေကိုတွေ့ရတယ်။ တရုတ်၊ စင်ကာပူ နှင့် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေလည်း အုပ်စုလိုက်တွေ့ရတယ်။
ထမင်းစားပြီးလို့ ပြတိုက်ရှေ့ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် နေ့လည်တစ်နာရီ မခွဲသေးလို့ဆိုပြီး ပြတိုက်မဖွင့်သေးပါ။ ဒါနဲ့ အနီးအနား လမ်းသလား ရင်း ဒုံပါတ်ရိုက် နေလိုက်ပါတယ်။
ပန်းသီးကြိုက်သူ ဗ တွေကတော့ ကိုယ်တွေလို နိုင်ငံခြားကိုလှမ်းမှာစရာမလိုဘူး
ဆိုင်ကယ်စီးရင်း ဖုန်းပြောတယ်၊ လမ်းစည်းကမ်း ယဉ်စည်းကမ်း ဘာအရေးလဲ ၊ ယဉ်မောင်းသူအချင်းချင်း နားလည်ရင်ပြီးတာဘဲ
ကြယ်ဖြူ တံဆိပ်ကြိုက်တဲ့လူတွေ နိုင်ငံခြားမှာစရာမလိုဘူး
စားသောက်ဆိုင်တန်းထဲမှာ Art Gallery သုံးလေးဆိုင်လောက်တွေ့ရတယ်။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ၊ ဗီယက်နမ်ရိုးရာ အဝတ်ထည်တွေ၊ လက်မှုပစ္စညးတချို့ နဲ့ ယွန်းပန်ချီကားတွေ ရောရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပါ။ ဒုံပါတ်ရိုက်မလာမိပါ။ ကြေးသွင်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းလက်ရာကောင်းတချို့တွေ့ပေမယ့် ဈေးတွေကခေါင်ခိုက်နေလို့ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
လက်ရာကောင်း ယွန်းပန်ချီကားတချို့ ဒေါ်လာ ၅၀-၆၀ လောက်နဲ့ရောင်းနေတာတွေ့တယ်။ ဈေးစနည်းနာဦးမယ်ဆိုပြီး မဝယ်ခဲ့မိဘူး။ နောက်တစ်နေ့ Halong Bay သွားရာလမ်းတစ်လျှောက် ကားရပ်နားရာနေရာတွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရိုးရာလက်မှုအရောင်းဆိုင်တွေမှာ ဒီလိုလက်ရာခပ်ဆင်ဆင် ယွန်းပန်ချီကားတွေကို ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက်ဈေးခေါ်ပြီးရောင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ မပြန်ခင်ပြန်သွားပြီးဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမယ့်မရောက်ဖြစ်တော့ပါ။
badinf, baung, cohtet, daylight, DrJones, honelay86, jokershan, k-pooh, koshwemung, Lynn Eainthu, Meursault, mgmgthan, mokenlay, Mood, nakamura, nyisay, orjawlan, Perigee, RunAtServer, Tawthumalay, ttaswo, Ye Win Soe, ZuKa
04-08-2011 05:03 AM #36
ပြတိုက်ပြန်အဖွင့်ကို စောင့်နေကြတဲ့ သူတွေမနည်းပါ။ သို့ပေမယ့် အရှေ့တိုင်းသားက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်။ အများစုက ပြင်သစ်တွေရယ်။ အဝင်ဝမှာရှိတဲ့ အဆောက်အုံသေးလေးမှာဘဲ လက်မှတ်ဝယ်ရတယ်။ ပြတိုက်ဝင်ကြေး VND 2,0000 (USD 1 ) ပေးရပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်ဟန် ၃ထပ် အဆောက်ဦးကြီးကပင်မ ပြတိုက်ဖြစ်ပြီး ဘေးကပ်ရက်က ၄ ထပ်အဆောက်ဦးဟာပြတိုက် နဲ့ ရုံးခန်းပူးတွဲအဆောက်ဦးဖြစ်တယ်။
By shaemm at 2011-04-07
Photo by Vietnam Spirit Travel
ပင်မပြတိုက်အဝင်ဝမှာ စားပွဲတစ်လုံးချထားပေမယ့် ရာသီဥတုအေးတာကြောင့်လားမသိ အစောင့်မရှိပါ။ စားပွဲပေါ်မှာတော့ လက်ကမ်းစာဆောင်တစ်ချို့နဲ့ ပြတိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံစာရွက်တွေအသင့်တင်ထားတာတွေ့လို့  ယူလိုက်ပါတယ်။ ပထမထပ် ဘယ်ဘက်အခြမ်းက အခန်း ၂-၃ တွေမှာ အေဒီ ၂ ရာစုကနေ ၉ ရာစုကြား ကျောက်စစ်လက်ရာတချို့ပြသထားပါတယ်။ ရှားပါးလက်ရာကောင်တွေဖြစ်ပြီး ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဈေးကွက်မှာမမြင်ဖူးသေးပါ။ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သောင်းနဲ့အထက်လောက်ရှိမယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရပါ။ ထုံးစံအတိုင်း မသိမသာခိုးရိုက်ရပါတယ်။
ခရစ်နှစ်အစောပိုင်း ဗီယက်နမ်မြို့ပြသမိုင်းမှာ ဒေါင်ဆောင်း ယဉ်ကျေးမှုဟာ ရှေ့တန်းနေရာကိုအတော်လေးရောက်လို့နေပါပြီ။ မြို့ပြနိုင်ငံ ၊ စစ်ဘုရင်စနစ် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လက်မှုအနုပညာတွေ အတော်လေးခရီးရောက်ပြီးဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်နီးခြင်းကပ်ရက်ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ခေတ်ပြိုင်ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီး ဖြစ်တယ်။ ကြေးကို သတ္တုစပ်ပြီး ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်နေပြီ။ လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ အခြား လူသုံး ၊ အိမ်သုံးပြီပစ္စည်း အတော်များများကို သတ္တုစပ်ထားတဲ့ ကြေးနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်နေပါပြီ။ ဒေါင်ဆောင်း မိုးခေါ်ဖားစည် (Dong Song rain drum ) ဟာ အင်မတန် လက်ရာအနုစိတ်ပြီး လက်ရာမြောက်တဲ့အတွက် ခုအချိန်အထိလူပြောသူပြောများတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ကိုယ်စားပြု ရှေးလက်ရာဖြစ်နေဆဲပါ။ မြန်မာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ အေဒီ ၂-၃ ရာစုနှစ် မြန်မာ့ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုဟာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာနည်းပြီး မပီပြင်သေးတဲ့ ပါးစပ်ရာဇဝင်အဆင့်မှာသာရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ ။
အခုမြင်နေရတာက အေဒီ ၂-၃ ရာစု (Dong Song) ကျောက်စစ်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်နှစ်အစောပိုင်း ဒေါင်ဆောင်း ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဟိန္ဒူဘာသာ လွှမ်းမိုးမှုများပါတယ်။ အခုမြင်နေရတဲ့ ကျောက်စစ်ရုပ်ကို Dancer, Dong Song II-III AD လို့ရေးထားတာတွေ့တယ်။ အမိနတ်သမီး ၊ ဒေဝီနတ်သမီး စတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေကို ဒီနေရာမှာ မဆွေးနွေးလိုပါ။ စလုံး NUS မှာသင်တန်းတစ်ခုကို ဦးစီးပြီးလုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်သူ ဧည့်ပါမောက္ခ CONSTANCE L KIRKER ကတော့ ဒီလိုအရုပ်မျိုးတွေ့ရင် '3bend dancer ' (3pronged posture ) လို့အလွယ်မှတ်ဖို့သင်တယ်။ ဗီယက်နမ်မှုပြုထားတဲ့ မျက်နှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ ဟိန္ဒူဘာသာဆိုင်ရာ ရှေးလက်ရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လမ်းကြုံတုန်းပြောချင်တာက အမျိုးသမီး ကနေဟန် လက်ရာတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာရှေးလက်ရာတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတ ယ်။ ခရစ်နှစ်အစောပိုင်း ဂန္ဓာရဟန်ကျောက်စစ်လက်ရာတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဗောဓိပင်နဲ့ ရွှေပလ္လင်မရအောင် မာန်နတ်မင်းကနှောက်ယှက်ရာမှာ ပထမဆုံးလက်နက်ဟာ ချောမောလှပတဲ့ သမီးပျိုးသုံးဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီး သုံးဦးဟာ တရားအားထုတ်နေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို ကပြပြီး မြှုဆွယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ မရတော့မှ ကြောက်မက်ဖွယ် ဘီလူးသဘက်တွေလွတ်ပြီး နှောက်ယှက်တာပါ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလက်ရာတွေကိုကြိုက်လွန်းလို့ ' မာန်နတ်မင်းရဲ့ သမီးပျို' ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်။
ခေတ်ပြိုင် ကမ္ဘောဒီးယား ယဉ်ကျေးမှုမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမှာ အုပ်ချုပ်သူဘုရင်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ ဘုရင်က ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ အခါ ပြည်သူတွေကလည်း လိုက်ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာတယ်။ နောက်ဘုရင်က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်တဲ့အခါ ပြည်သူအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက စောစောကပြောခဲ့တဲ့ ကနေတဲ့ အမျိုးသမီးကျောက်စစ်လက်ရာတွေဟာ ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရားမ ဖြစ်လိုက် ၊ မာန်နတ်မင်းရဲ့ သမီးပျိုဖြစ်လိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီး ထုစစ်ကြပြန်ရော။ ခရစ်နှစ် ၇-၈ ရာစုလောက်ရောက်တဲ့အခါ မာန်နတ်မင်းရဲ့ သမီးပျိုတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အဆောက်အုံတွေမှာ တွင်တွင်သုံးနေကြပါပြီ။ အခုလူပြော သူပြောများတဲ့ ' Apsara ' ဟာ မာန်နတ်မင်းရဲ့ သမီးပျို ကနေဆင့်ဆင့်ပြုပြင် ယူလာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ပလ္လင်ပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေဟန် ' သီဝ နတ်ဘုရား' ဖြစ်ပါတယ်။ God Shiva, Dong Song, 2-3 AD လို့ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသလိုပါဘဲ ဗီယက်နမ်မှုပြုထားတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဆိုင်ရာ ရှေးလက်ရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ ပလ္လင်မှာ ထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ ဘီလူးပန်ဆွဲပုံဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှတခွင်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်ဦးတွေ စေတီတွေမှာ တွေ့ရတက်တဲ့ ' ကိတ္တိ မုခ ' ပုံတွေဖြစ်လာတာကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
ရှေဟောင်း ပစ္စည်းဈေးကွက်မတော့ ဒေါင်ဆောင်းဖားစည်တစ်ခုဟာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၄-
၅ သောင်းလောက်ရပြီး လိုချင်သူများတဲ့ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကရင် ဖားစည်နဲ့ ပြုလုပ်ပုံနည်းပညာအတူတူပါဘဲ၊
ဒါကတော့ မီးဖုတ်မြေထည် လက်ရာတစ်ခုပါ။ ကိန္နရီ ၊ ကိန္နရာ ဒါမှမဟုတ် ဇာမဏီငှက်အဖြစ် နောက်ပိုင်း အရှေ့တောင်အာရှမှာ အသုံးများတဲ့ အလှဆင် ဒီဇိုင်းအဖြစ်တွေ့ရမှာပါ။
ဒေါင်ဆောင်း လက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီး ချိန်မှာတော့ ဟိုဘက်အခြမ်းက တရုတ်ဟန်လွှမ်းတဲ့ ၁၀ ရာစုလက်ရာတွေဘက် လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်.....
Last edited by mrlynn; 04-08-2011 at 05:06 AM.
Alintan, Ares, badinf, baung, cohtet, daylight, DrJones, honelay86, jokershan, k-pooh, koshwemung, Lynn Eainthu, Meursault, mgmgthan, Mood, nakamura, nyisay, Perigee, Tawthumalay, Ye Win Soe, yehtut15, ZuKa
05-04-2011 04:33 PM #37
'DxJ ra&;jzpfwm Mumaygh/ 'Dwpfacgufjyefvm&ifawmh oGm;cJhwJhae&mav;awG AD,uferfawG&JY b0av;awG a&;ygOD;r,f/
ydwf&ufrSm rxifrSwfyJ AD,uferf jynfwGif; bk&m;zl; c&D;oGm;tzGJYwckeJY vdkufoGm;rdvdkufw,f/ Tour Bus wpfpD;vHk;rSm AD,uferf r[kwfwmqdkvdkY usaemfwpfa,mufyJ ygw,f/
wcktawGYtMuHK&vdkufwmu AD,uferfawG&JY pdwfae pdwfxm;awG trltusihfawG tavhtxawGudk
AD,uferf pum;om rwwfwm ? rajymwwfwm . touf .. 50 60 avmuf&dSwJh AD,uferf tbGm;MuD;awGeJYawmif rdwfaqGjzpfcJhao;/ cdcd
aemufMuHK&ifvnf; olwdkYtzGJY c&D;oGm;&if vdkufcJhygOD;wJhav /
ckawmh rjyD;qHk;ao;wJh tvkyfawGeJY eyef;qufowf&OD;r,fAsm
Alintan, cannavaro, cohtet, DrJones, GeneralBoz, Grace, honelay86, jokershan, k-pooh, Kaung Lay Luck, koshwemung, mgmgthan, Mood, mrlynn, nakamura, nyisay, Perigee
05-10-2011 12:53 AM #38
မနှစ်တစ်နှစ်ကမှ ရှာတွေတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဂူဆိုတာကြီး ရောက်သေးလား။အတွင်းထဲမှာ တော်တော်လှမယ့်ပုံဘဲ။
Alintan, cohtet, Grace, honelay86, jokershan, koshwemung, mgmgthan, Mood, mrlynn, Perigee
05-21-2011 06:16 AM #39
ကို အန်ထော်နီပြောတဲ့ ကဘာ့အကြီးဆုံး လှိုဏ်ဂူတော့ မသိဘူးဗျ။ ။ ရောက်ဖူးတဲ့ ထုံးကျောက်လှိုဏ်ဂူ Dau Go Cave အကြောင်းပြန်ပြောပရစေ။ Halong Bay မှာရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကျွန်းတွေထဲက ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ ထုံးထုံးကျောက်လှိုဏ်ဂူပါ။ ဟာလောင်ဘေသွားတဲ့ ခရီးစဉ်မယ် အဲဒီဂူကိုအရင်ဝင်ရတယ်။ ဟာလောင်ဘေ သွားလာခွင့်လက်မှတ်ကိုလည်းအဲဒီမှာဝယ်ရတယ်။ တခြား လှိုဏ်ဂူတွေရှိသေးပေမယ့် ဝယ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်ထဲမှာ မပါလို့မရောက်ဖြစ်ဖူး။
သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ထုံကျောက်ပန်းဆွဲတွေကြောင့် အတော်လေးလှပါတယ်။ မီးတွေနှင့်အလှဆင်ထားတော့ ပိုပြီးမြင်သာတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘာဝအရှိတိုင်း မြင်ရတာမျိုးကို ပိုနှစ်သက်တဲ့အတွက် ရောင်စုံးမီးလုံးတွေကို စိတ်ထဲတော့ သဘောမကျလှပါဘူး။ ဝင်ဝင်ခြင်းအတော်လေးဟိုက်အောင်တက်ရတယ်။ အဲဒီဝင်ပေါက်ကနေမှ လုပ်ထားတဲ့လမ်းအတိုင်း ပြန်ထွက်တဲ့အခါ အလာတုန်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ ကွေ့ပတ်ပြီးထွက်ရတဲ့ သီးသန့်အထွက်လမ်းရယ်။ ရိုက်လာတဲ့ လမ်းပြမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။
ဗီယက်နမ် ၊ ဟနွိုင်း ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဟာလောင်ဘေ ကိုတော့ရောက်ဖြစ်အောင်သွားဗျို့ နေ့ခြင်းပြန်ခရီးဆိုဘာမှမပေးရဘူး။ US 25 နဲ့တင်ကိစ္စပြီးတယ်။
Last edited by mrlynn; 05-21-2011 at 07:27 AM. Reason: spelling
AnthonyM, baung, blooom, Chit Suu, cohtet, daylight, Deadmanwalking, honelay86, ironhorse, jokershan, k-pooh, KM Wai, Ko Khant, koshwemung, mgmgthan, mokenlay, Mood, nakamura, nyisay, orjawlan, Perigee, Saime, saimgmg
05-24-2011 03:25 AM #40
udkvif;wdkYurS udk,hfxufae&mpHka&mufzl;ao;w,f/ usaemfhrSm AD,uferfwm oGm;aewm tvkyfwpfzufeJYqdkawmh ae&mpHk avQmufrvnfjzpfao;bl;/ 'Dwpfacgufvnf; wpfae&myJ vnfjzpfcJhw,f/ tcsdef&rS udk,hfbmom oGm;vnfrSyJ tESHH ha&mufjzpfawmhr,fxifw,f/
'Dwpfacguf rxifrSwfyJ a&mufoGm;wm [dkcsDrif;jrdKY&JY ta&SYawmifbuf uDvdk 40 avmufae&mu Cần Giờ qdkwJhae&mu Monkey island and Mangrove Forest ae&mav;ygyJ/ jrefrmjynf jrpf0uRef;ay:vdk ae&mrsdK;aygh/ UNESCO uBiosphere Reserve vkyfzdkY xdef;odrf;xm;wJh pm&if;xJ ygwJhae&mwckyg/
'Dwpfacgufa&mufawmh ydwf&uf3&ufeJY MuHKw,f/ &Hk;u oli,fcsif;awGu udk,fhtpDtpOfawGeJY udk,foGm;MurSmqdkawmh3&ufvHk; tcef;atmif;ae&r,fh udef;qdkufaew,f/ 'DrSmwif AD,uferf oli,fcsif; wpfa,mufu zkef;qufw,f/ rif;rSm b,foGm;zdkY tpDtpOf&dSvJwJh/ bmrS r&dSbl;qdkawmh ..
apmapmu MudKrajymbl;wJhav/ tck vdkufar;MunhfOD;r,fqdkjyD; rMumcif zkef;jyefqufw,f/
Vung Tau Beach t&rf;om,mw,f/ oGm;csifayr,fh 'Dtcsdefqdk vlu wtm;rsm;rSmwJh/ ( olajymwm rSefrSef; aemufawmh odvdkuf&w,f/ ) 'Dawmh olYtod wpfa,muf Pagoda Tour wckpDpOfxm;wm &dSw,fwJh/ tJ'geJY vkdufoGm;Mur,fwJhav/ ae&mawmh &atmif olajymMunhfay;r,fwJh/ reuf4em&Da&mufatmif olYae&mudk vmcJhwJh/ oGm;r,fhae&mawGxJrSm bk&m;awGaum Cần Giờ Monkey island udkygw,fwJh/ olvJ tJae&m ra&mufzl;ao;bl;wJh/ Vung Tau Beach udkyJ cPcP a&mufzl;wmwJh/
(Vung Tau qdkwJhae&mu jrefrmjynfu xm;0,fa&eufpDrHudef;jyD;&if pD;yGm;a&;t& vrf;azmufjyD; qufoG,fr,fhae&m wckyg/ )
'DvdkeJY reuf4em&Davmuf wufpDiSm;pD;jyD; olYae&m a&mufoGm;w,f/ bk&m;zl; express um;MuD;wpfckvHk; AD,uferfawGcsnf;yJ/ AD,uferf r[kwfwmqdkvdk Y udk,fwpfa,mufyJ ygw,f
uav;awGaum tzGm;MuD;awGaum ygw,f/ tzGm;MuD;2a,mufuqdk oabmaumif;csuf/ usaemfh oli,fcsif;uae usaemfhtaMumif;awG ar;aeav&JY/ jyD;awmh olwdkY ygvmwJh rkefYawG xkwfauR;w,f/ rpm;zl;qdkvJ &bl;/tJrkefYawGxJrSm olwdkY udk,fwdkifvkyfxm;wJh AD,uferf rkefYzufxkyfav;awG auR;w,f/ ( jrefrm rkefYzufxkwfvdkygyJ ) txJrSm yJ ygwm&dSw,f/ tkef;oD; ygwmawG &dSw,f/ olwdkY rkefYzufxkwfu Mwd*HyHkr[kwfyJ jrefrmu waumufzmyHkav; av;axmifhyHkbl;av;awG/ pm;vdkYawmh aumif;om;/ oli,fcsif;u riff;jzpfrS pm;aemfwJh tm;emjyD; rpm;eJYOD;wJh/ jzpfygw,fvdkY igwdkYqDrSmvnf;&dSw,fqdkjyD;2ckavmuf pm;ypfvdkufw,f/ tzGm; ESpfa,mufu oabmawGusvdkY/ xyfay;aevdkY awmfygjyD renf;wm;&w,f/
usaemfoGm;cJhwJh ae&muav;u atmufu ajryHkxJu ae&mav;yg/
cohtet, Deadmanwalking, DrJones, hngetsoe, honelay86, ironhorse, johnansen, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, KM Wai, koshwemung, mgmgthan, mokenlay, Mood, mrlynn, nakamura, orjawlan, Perigee, saimgmg, solidsnake, Yamarmoto